Nangina tanteraka ny resaka politika tao anatin’ny erinandro vitsy izay. Mitodika any Egypte tanteraka ny mason’ny maro ankehitrihiny. Zary lasa adino ny fifandirana politika maro lafy. Raha ny tsikaritra ankehitriny; mampiray ny feon’ny Malagasy tsy vakivolo ny fanohanana ny ekipam-pirenena BAREA miatrika ny CAN. Io firaisan-kina io izay adinon’ny maro tao anatin’ny taona maro fa variana tamin’ny fifandirana tsy nahitam-bokatsoa ny ankamaroan’ny vahoaka Malagasy. Ankehitriny kosa anefa, hita taratra ny fiarahan’ny Malagasy mifampitantana rehefa mahita fandresena ny BAREA an’i Madagasikara.
Tsy nampiray ireo tsy nitovy hevitra ara-politika ihany anefa ny fiakaran’ny Barean’I Madagasika amin’izao lalao CAN izao, fa isan’ny niteraka asa ho an’ny ampahan’ny vahoaka Malagasy ihany koa. Santionany amin’izany ny fiparitahan’ny ankanjo maro isan-karazany amin’ny fanohanana ny ekipam-pirenena Malagasy. Zary lasa manana fanantenana amin’ny ho avy ireo vahoaka tsy mandady harona ny vokatry ny fandresenan’ny BAREA.
Araka ny tsikaritr’ireo mpanara-baovao maro; ho fantatr’izao tontolo izao Madagasikara noho iny lalao iny hatrany. Hiroborobo manaraka izany ny fizahan-tany izay hampiakatra ny toekarem-pirenena ihany koa. Tsy azo hiodivirana noho izany fa nampiray Malagasy ary nampisongana ity firenentsika ho fantatr’izao tontolo izao ny fandraisan’I Madagasikara anjara tamin’iny CAN 2019 ity.